Mee ka ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ mụbaa ma mee ka mmekọrịta ndị a dịkwuo mma site na ntanetị ndị a sitere na mkpokọta
Frank Abagnale, Semalt Onye ahịa na-eme nke ọma, kwuru ihe bụ isi kpatara Twitter dị ukwuu:
Iso ndị ọzọ na-enye gị ezigbo uru
Na-eme ihe yiri nke ị ga - ewere na ọnọdụ dị adị
Ọ dịghị spam
Ịzụlite mmekọrịta dị ịrịba ama
Echiche ndị a bụ isi dị ezigbo mkpa n'ịhụ ọrụ ọrụ Twitter maka gị.
1. Ịgbaso ndị ọzọ na nloghachi
Ana m ejide ndụmọdụ ndụmọdụ Twitter mgbe niile na onye ọ bụla kwesịrị iso onye ọ bụla soro ya. Achọpụtala m nhọrọ nchịkwa nke na-egosi na ọ na-adọrọ m mma: Nhọrọ ahụ na-ekwu na onye kwesịrị ịgbaso akụkọ ndị nwere mmasị.
2. Ụzọ dị oké mkpa ị ga-esi soro ndị mmadụ na Twitter
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịkwalite mgbasa ozi jiri Twitter mee ihe, ị ghaghị iburu n'uche ihe atọ ndị a iji bie echiche a: ozi, aka, yana Reach.
3 - data recovery services bay area..Ikekọrịta oku na-eme
N'otu ntabi anya, onye ọ bụla nwere ike ịnwe ohere isoro ndị mmadụ na-akparịta ụka ma soro ndị obodo gị kwurịta ihe ukwu na-eme na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ịkwesighi ịbụ onye ihere na ahịa.
Ọ bụrụ na ịchọtaghi ọdịnaya site na akaụntụ Twitter nyere, ị nweghị ihe mere ị ga-eji soro azụ. Na ohere na ndị na-agụ akwụkwọ nwere mmasị na gị na post, ha ga-anọgide na-eso gị na n'oge na-adịghị ga-aghọ ndị na-agụ akwụkwọ mgbe nile.
4. Retailing ngwaahịa na ọdịnaya site na netwọk netwọk weebụ
Nkwalite ọdịnaya na-ejikọta ya na inye ụfọdụ ndị na-eso ụzọ gị ma na-emekọrịta ihe site na ọdịnaya dị egwu. Ọ bụrụ na post na saịtị gị nwere ọdịnaya pụrụ iche, egbula oge ịbanye oku na bọtịnụ.
5. Ndị na-emerụ ahụ
Ọ bụ ezie na ihe ka ọtụtụ n'ime mgbasa ozi mgbasa ozi ga-akụziri gị ka ị na-emekọrịta ihe na influencers na ebumnuche iji nweta nkwenkwe na ndị na-eso ụzọ, na omume, ọ bụ ọrụ dị mgbagwoju anya! Ndị na-egbu mgbu na-arụsi ọrụ ike karịa mgbe ọ na-adịghị, ma yikarịrị ka ha na-azaghachi ọtụtụ narị tweets kwa ụbọchị.
6. Echefu usoro iheomume gị
Ọ bụrụ na ị na-eji Twitter eme ihe dị ka nhazi ihuenyo ahaziri, ị ga-achọ ịhụ na usoro iheomume gị na-ejide onwe ya ma dị ọcha. Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eso Twitter, ị ga-amalite ịgbaso ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ na usoro iheomume gị ga-eto eto.